မင်းထံသို့ 500th ပို့စ်ကို! | Martech Zone
မင်းထံသို့ 500th ပို့စ်တင်ပါ။
အင်္ဂါနေ့, မတ်လ 27, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
အိုကေတော့ဒါဟာတကယ်တမ်းပို့စ်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော်လောက်ရှိပေမယ့်အဲဒါကိုမေ့သွားပြီးလွဲချော်သွားတယ်။ ငါအခု ၈ လလောက် blogging ပြီးပြီးပြီ။
အကြှနျုပျ၏ Technorati, ပါဝါ 150 နှင့် Alexa ရာထူးများငါအစဉ်အမြဲငါသူတို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုစိတ်ကူးဘယ်မှာအထက်ဖြစ်ကြသည်။ တကယ်တော့ငါဘလော့ဂ်ပေါ်မှာလည်း ၀ င်ငွေကောင်းကောင်းရနေတယ်၊ ​​ဝေးလည်းဝေးတယ် ယောဟနျသ Chow ကျွန်တော့်ရဲ့အဆီ - အဘယ်သူမျှမ - နှင်တံ - ခမ်းနား - mocha-starbucks အလေ့အထ၌ငါ့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လုံလောက်သော။
ငါကဘယ်လိုလုပ်လုပျခဲ့သလဲ ကြိုးစားအားထုတ်မှု။ (link ကိုနှိပ်ပါ။ Loren ကိုအချိန်တိုင်းငါ Yankees ဂိမ်းကိုသွားချင်တယ်၊ ခွေးတချို့စားချင်တယ်၊ Red Sox ပရိတ်သတ်တွေမှာဘီယာထည့်ချင်တယ်!)
Loren မေးသည့်အခါ 3am (တစ်ခါတစ်ရံတစ်ညလုံး) blogging ကိုပုံမှန်တက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Indianapolis တွင်နေထိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဆီလီကွန်တောင်ကြားညီအစ်ကိုများနှင့်အတူသွားရန်အခွင့်အရေးမရှိပါ - သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်သုတေသန၊ စမ်းသပ်ခြင်းအကြားတွင်အချိန်ကုန်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်နှင့်ထိတွေ့မှုနှင့်ထိပ်ဆုံးနေရာတွင်ရှိနေခြင်းကိုအံ့သြမိသည်။ မျှဝေခြင်း၊ ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ဓာတ်ကူပစ္စည်းဖြစ်ခြင်း၊
သာဓက - ပြီးခဲ့သည့်ညနှင့်ယနေ့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် Geo Microformats နှင့်ပေါ်သူတို့ကိုအကောင်အထည်ဖော် လိပ်စာ fix ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းမှသူငယ်ချင်းအသစ် Andy အတွက်။
ငါကျင်းပသင့်တယ်ဒါပေမယ့်ဒီညပွဲကိုငါမသွားနိုင်ဘူး။ ဘလော့ဂ်ပို့စ် ၁၀၀၀ အတွက်တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးလိုက်လုပ်ပါ့မယ်။ မသေချာဘူး။ ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်မှတစ်ဆင့်လူနှင့်နည်းပညာများကိုချိတ်ဆက်နိုင်သည့်ကျွန်ုပ်၏အသစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မှုကြောင့်ကြီးမားသောအပြောင်းအလဲများသည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းပေါ်တွင်ရောက်ရှိနေကြောင်းကျွန်ုပ်သိပါသည်။ ငါအမြဲတမ်းသတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်မျှဝေမှာကောင်းသောဖြစ်ခဲ့သည်။ လူအများစုထံထိရောက်စွာရောက်ရှိနိုင်ရန်အတွက်ဘလော့ဂ်သည်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ ၁၀၀,၀၀၀ ကျော်ကိုငါရောက်ခဲ့ပြီ၊ ငါ့ရဲ့အကောင်းဆုံးနေ့ကလူပေါင်း ၅၅၀၀ ။ ဒါကငါ့အတွက်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ပါပဲ တစ်နေ့တာမှာလူ ၅၅၀၀ ကိုစကားပြောဖို့စိတ်ကူးမရဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါပြောခဲ့တယ်။
အမှန်တရားကတော့ဘလော့ဂ်ပြုလုပ်ခြင်းသည်မည်သည့်အရာထက်မဆိုပိုပြီးကျေနပ်စရာကောင်းပါတယ် အလုပ် ငါအစဉ်အမြဲငါရှိခဲ့ကြောင်း ငါနှင့်အတူသတင်းအချက်အလက်မျှဝေသောစာဖတ်သူများသည်, ယဉ်ကျေး, ယဉ်ကျေးလေးစားမှု, လေးမွတျခြင်းနှင့်ရိုးသားဖြစ်ကြသည်။ ရာနဲ့ချီတဲ့ဘလော့ဂါတွေကိုသူတို့ဘလော့ဂ်တွေတိုးတက်အောင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကူညီခဲ့ဖူးတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဲဒီလိုကိုယ်ကျိုးမငဲ့ဝေမျှခဲ့တဲ့ငါ့ရှေ့မှာဘလော့ဂါတွေရဲ့အကူအညီမပါဘဲငါလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါတို့ရှာဖွေနေသည့်အဖြေများကိုသူတို့၏မဆုတ်မနစ်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်မဆုတ်မနစ်ရှာဖွေမှုအတွက်သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော့်ကိုအားပေးနေဆဲဖြစ်တဲ့အပြင်ကျွန်တော့်အတွက်လာမယ့်အရာတွေရှိတယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်လို့ပြောတဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ... သင်တို့ရှိသမျှကိုမှ 500th မင်္ဂလာ။ ဖတ်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ့ကိုအရင်ကထက်ပိုမိုကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဘလော့ဂ်လုပ်ခြင်းဟာတစ်ခါမှမလုပ်ဖူးဘူး၊ ကျွန်ုပ်သည်စာအုပ်များ၊ ဆောင်းပါးများ၊ ဘလော့များ၊ မှတ်ချက်များနှင့်နည်းပညာများအလုံအလောက်မရနိုင်ပါ။ ယခုတွင်ငါသည်သူတို့၏ဘလော့ဂ်ရေးရာမဟာဗျူဟာနှင့် ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီများအားတက်ကြွစွာအကြံပေးလျက်ရှိသည် - လွန်ခဲ့သော ၈ လကလုပ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်မှန်းဆ။ မရနိုင်ပါ။
Loren (ဒါတိုက်ရိုက်) ကိုထည့်လေ့မရှိသကဲ့သို့ငါ am တစ် ဦး က A-List ကိုဘလော့ဂါ။ ငါမည်သည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာရင်းတွင်မဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းကမင်းကိုပြန်လာပြီးဆွေးနွေးမှုမှာနေ့တိုင်းပါဝင်တဲ့အတွက်မင်းကငါ့ကိုနံပါတ် ၁ ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ ငါမည်သည့်စာရင်းသို့မဟုတ်ရာထူးပြသသောအရာကိုဂရုမစိုက်ပါဘူး။ မင်းရဲ့ဂရုစိုက်မှုကြောင့်ငါမင်းကိုအများကြီးအကြွေးတင်နေတယ်။
လာမယ့်ပို့စ် ၅၀၀ ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်မှာခေါ်မလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ်။
Tags: ဘလော့ပို့စ်ပေါင်း ၅၀၀ဘလော့ဂ်ပို့စ်များ
တစ်ခါတစ်ရံတွင် Mac များထိုစမတ်မဟုတ်ပါ
မတ်လ 27, 2007 မှာ 9: 00 pm တွင်
ပထမဆုံး မှတ်ချက်ပေးသူမဟုတ်တဲ့အတွက် ဝမ်းသာပါတယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်သို့ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်စေရန် မှတ်ချက်ပေးရုံမျှသာဟု သင်ထင်မြင်မိမည်ကို စိုးရိမ်မိပါသည်။ မင်းက ငါ့ကို သင်ပေးခဲ့တယ်၊ ငါ့သမီး။ ဆက်သွားပါ။ မင်းရဲ့ ရက်ရောမှုက မင်းကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချမ်းသာအောင်လုပ်ထားပြီးသား... မင်းရဲ့ဘဏ်အကောင့်လည်း ဖောင်းပွလာမယ်လို့ ငါမျှော်လင့်တယ်။
မတ်လ 27, 2007 မှာ 9: 08 pm တွင်
ခင်မင်ရင်းနှီးမှုသည် မည်သည့်ဘဏ်အကောင့်မဆို Pat ထက်ပိုတန်ဖိုးရှိသည်။ ပို့စ်ကို တည်းဖြတ်ခဲ့တယ် (မင်းမှတ်ချက်မရေးခင်) က “သူငယ်ချင်း” ထက် မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကို လင့်ခ်တစ်ခုကို လွှင့်ပစ်လိုက်တဲ့အတွက် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မင်း အဲဒီလင့်ခ်ကို ရသွားလိမ့်မယ်။ မင်း ငါ့ကို ဆက်ပြီး အားပေးပြီး ငါ့ကို ပိုဆာလောင်စေတယ်။ ဤနေရာတွင် "သူငယ်ချင်း" လင့်ခ်တစ်ခုခုတွင် သင့်တွင် ပထမဆုံး dibs ရှိသည်။
Pat မသိတဲ့ သူတွေအတွက်၊ အလုပ်လုပ်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ drives မှာ ဖုန်းနဲ့ စကားပြောပြီး ကမ္ဘာကြီးကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲနေလဲ (ဒါမှမဟုတ် ကြိုးစားနေပုံ) အကြောင်း ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ Pat မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ဘလော့ဂ်တစ်ခု ရခဲ့ပါတယ်၊ သူ့ရဲ့ အရေးအသားစွမ်းရည်က ကျွန်တော့်ထက် အများကြီးသာလွန်ပြီး ကျမ်းချက်တွေကို ဘဝနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်က ကျွန်တော် လိုချင်တဲ့အရာပါ။
Pat သည် အောင်မြင်သော ကုမ္ပဏီများစွာကို စတင်ခဲ့ပြီး သူငယ်ချင်း၊ ဖောက်သည်နှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဟူသည် မည်သူမဆိုထက် ပိုသိသည်။ ဟယ်၊ သူက Colts တွေကို Superbowl ထဲတောင် ခေါ်သွားသေးတယ်။ အဲဒီကောင်လေး Peyton က နည်းနည်းကူညီတယ်။
မတ်လ 27, 2007 မှာ 8: 55 pm တွင်
ခင်​ဗျားကို ဂုဏ်​ပြုပါတယ်​!! အံမခန်းပဲ အံမခန်း။
Loren ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းက စိတ်အားထက်သန်တဲ့သူ အများကြီးထဲက တစ်ယောက်ပါ။
မတ်လ 27, 2007 မှာ 10: 28 pm တွင်
ဂုဏ်ယူပါတယ် Doug မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကို ဖတ်ရတာ နှစ်သက်ပြီး နောက်ထပ် 500 ကို စောင့်မျှော်နေပါတယ်။ အကြိမ် 1000 ပို့စ်အပြီးတွင် ဘလော့ဂါများသည် ပင်စင်စုဆောင်းနိုင်သည်ဟု ကောလာဟလများ ထွက်ပေါ်နေသည် - ထို့ကြောင့် သင်သည် ယခုအချိန်တွင် ဘလော့ဘဝ၏ အလယ်အလတ်အကျပ်အတည်းတွင် ရှိနေသည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ 🙂
မတ်လ 27, 2007 မှာ 9: 34 pm တွင်
ဂုဏ်ပြုပါတယ် Doug။ အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ မင်း တော်တော်ဝေးဝေးကို ရောက်နေပြီ။
မင်းပြောသလိုပဲ တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ ပို့စ်တင်ပါ...
ဘလော့ဂ်ရေးတာမဟုတ်ရင် ငါတို့က သူငယ်ချင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး… ဒါကြောင့် မင်းလိုပါပဲ၊ နှစ်တွေကြာအောင် ငါလုပ်ခဲ့တဲ့ ချိတ်ဆက်မှုတွေအတွက် ငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
ဒါတွေအားလုံးက ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်… ကျွန်တော် ဘလော့ဂ်လုပ်လာတာ9နှစ်ကျော်ရှိပြီ လူကောင်းတွေ အများကြီးနဲ့တွေ့ပြီး နည်းပညာအသစ်တွေ အများကြီးသင်ယူပြီး ထရပ်ကားနဲ့ ဆက်သွားနေလိုက်တယ်...
နောက်ဆုံး၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ အပြောင်းအရွေ့တစ်ခုမှာ၊ ကျွန်ုပ်သည် URL အသစ်ဖြင့် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ စတင်နေပြီဖြစ်သည်… ၎င်းသည် နှစ်များအတွင်း မည်သည့်နေရာတွင် ရှိနေသည်ကို မြင်တွေ့ရန် သပ်ရပ်နေလိမ့်မည်… သင်နှင့်အတူ လိုက်ပါလာမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
မတ်လ 27, 2007 မှာ 9: 41 pm တွင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Sean ဤကာလအတွင်း သင်သည် ကျွန်ုပ်အား SEO နှင့် CSS အကြံဉာဏ်ကောင်းအချို့ကို ချပြခဲ့ပြီး အကူအညီအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မင်းက ငါ့ရဲ့ IE6 (yuck!) စောင့်ကြည့်သူလည်း ဖြစ်တယ်။
နောက်ထပ်အကြံပြုချက်အချို့ကို စောင့်မျှော်နေပါသည်... ကျွန်ုပ်၏ Pagerank အမြဲတမ်း သုညဖြစ်နေပုံရသည်ကို ရှာဖွေခြင်းကဲ့သို့ပင်။ Google-Boy ကို ကူညီပေးပါ။
မတ်လ 27, 2007 မှာ 10: 09 pm တွင်
အခြား 3AM ဘလော့ဂါမှ Doug အား ဂုဏ်ပြုပါသည်။ နောက်ထပ် Starbucks ကို Extra Large ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။
မတ်လ 28, 2007 မှာ 11: 55 AM
Indy ဘလော့ဂါဖော်က မင်္ဂလာပါ 🙂
မတ်လ 28, 2007 မှာ 9: 24 pm တွင်
ဂုဏ်ပြုပါသည်။ မနှစ်က သင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ အလုပ်တွေအားလုံးနဲ့ ဘယ်လောက်မြန်မြန်ကြီးပြင်းလာတာကို မြင်ရတာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာပါပဲ။ ကျွန်တော်လည်း #1000 တင်ဖို့ရှာနေပါတယ်။
မတ်လ 28, 2007 မှာ 9: 26 pm တွင်
မတ်လ 31, 2007 မှာ 1: 03 pm တွင်
ကောင်းသောအလုပ်၊ Mr. Karr!
မတ်လ 31, 2007 မှာ 2: 07 pm တွင်